Sababta Rasmiga Ah Ee Aan Loogu Tartameyn Kursiga » Axadle Wararka Maanta
Sababta rasmiga ah ee aan loogu tartameyn kursiga
Muqdisho (Axadle) – Liiska musharaxiinta xildhibaanada Aqalka Sare ee goboladda Waqooyi ee loo yaqaano Gobaladda Waqooyi oo maanta la shaaciyey, ayaa waxa kursiga 1-aad loo xiray Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi.
Toban ka mid ah kuraasta ayaa waxaa ku tartami doona laba illaa saddex musharax, halka Kursiga 1-aad uu musharax u yahay kaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi, midaasi oo hadal hayn badan dhalisay.
Wasiirkii hore ee Warfaafinta Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) oo kamid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada Waqooyi ee u dhow Cabdi Xaashi ayaa sheegay in Guddoomiyaha lagu maamusay kursigaas.
Waxa uu sheegay in la waayey cid la tartanta, kadib markii ay dadka la leh kursiga uu ku fadhiyo ee Aqalka Sare ay go’aansadeen in aan lagula tartamin, isagana uu iska diiday musharax maqaar saar ah oo lala qoro, sida hore u sameeyen musharaxiin badan.
“Sharaf iyo karaamo ayey u tahay Gudoomiye Cabdi Xaashi in dadka la leh kursiga uu ku fadhiyo (Aqalka Sare) ee Gobolka Waqooyi Galbeed si Volunteer ah u go’aansadaan in aanay Kursiga kula tartamin oo uu yahay National icon lama taabtaan ah, isla markaana Gudoomiyuhu diiday fikir ay dad ula yimaadeen oo ahaa in loo keeno qof waraabe utaag u noqda,” ayuu ku yiri Maareeye qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.
Maareeye oo saaxiib dhow la ah Cabdi Xaashi, ayaa xusay in Cabdi Xaashi uu yahay Astaan Qaran, halka uu sheegay in loo gartay in kursigaas uu noqdo lama taabtan, waana odayga uga da’da weyn ee siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada Waqooyi.
Liiska musharraxiinta xildhibaannada Aqalka Sare, oo tiradooda dhan tahay 24 musharax ayaa waxaa maanta Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi ka guddoomay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble.
Musharaxiinta ay soo gudbiyeen Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi ayaa waxay u tartami doonaan 11 Kursi oo Aqalka Sare ay ku leeyihiin gobolada Waqooyi ee hadda loo yaqaano Gobaladda Waqooyi.